म मरेको दिन कस्तो होला? :: नवराज पराजुली :: Setopati
हावा नभएपछि त ऊ कतै भाग्न पनि सक्दैन। धन्न भाग्न सक्दैन। नत्र आगोको हुरी कस्तो देखिँदो हो?
(नवराज पराजुलीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
म मरेको दिन कस्तो होला- सुन्नुस् अडियोमा
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७, ११:२२:००